Daahfurka iPhone 7, astaamaha iyo qiimaha  Apple | Wararka IPhone
Inyar oo yar, warar la xidhiidha iPhone 7-ka, Taleefanka casriga ah ee Apple ee aan weli lahayn taariikh sii deyn. Dhanka kale waxaan saadaalineynaa howlaha cusub, astaamaha iyo astaamaha ugu horeeya ee ka muuqda mustaqbalka terminal oo ka socda shirkadda Cupertino.
Warar ku saabsan iPhone 7
Apple waxay dib uga soo ceshanaysaa iPhone 7 iyo iPhone 8 labadaba suuqa Jarmalka Qualcomm awgood
Dagaalkan ay wadaan Apple iyo Qualcomm ayaa umuuqda in xilligan uu ka fogyahay. Marka hore waxay ahayd Shiinaha, oo ...
Maxkamad ku taal Munich ayaa mamnuucday iibinta iPhone 7 iyo 8 ee Jarmalka
Dhaawaca cusub ee Qualcomm ee dagaalka ka dhanka ah Apple ee ku xadgudubka sharciga. Xaaladdan oo kale, sidoo kale waxaan kari karnaa ...
Feejignaan, haddii aad leedahay iPhone 7 waxaa laga yaabaa inaad dayactirto makarafoonka
by Kariim Hmeidan samee 4 sano .
Apple uma muuqato inuu ka takhalusi doono dhibaatooyinka kor ku xusan, waana wax aan macquul aheyn in la abuuro wax soo saar wanaagsan ... Mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn ...
Apple waxay bilaabaysaa iibinta iPhone 7 iyo 7 Plus qaybteeda dib loo soo celiyay
Waana in mashiinada Apple aysan istaagin oo maalmo kooban adeegsadayaasha ku nool ...
Apple waxay dayactir ku sameyn doontaa iPhone 7 iyadoo ay ku fashilantay caymiska si bilaash ah
Sannadkii 2016-kii waxaa jiray kiisas qaar ka mid ah dadka isticmaala iPhone-ka cusub ee iPhone 7 iyo iPhone 7 Plus ...
IPhone 7 Plus wuxuu ahaa taleefanka labaad ee ugu caansan Shiinaha inta lagu gudajiray 2017
Suuqa mobilada casriga ahi waa adag yahay: soo saarayaal badan oo dalka ka mid ahi waa soosaaraal waawayn oo xayeysiisyo aad u xiiso badan leh….
NAB wuxuu ku adkeysanayaa in Apple ay dhaqaajiso qalabka FM-ka ee qalabkeeda
Bayaanka ugu dambeeyay ee ka imanaya wiilasha Cupertino ee ku saabsan codsigii Ururka Qaranka ee Warbaahinta (NAB) ...
IPhone-kaaga ayaa hada kuheli kara lacag la'aan wireless ah Mophie's Charge Force
by louis padilla samee 4 sano .
IPhone-ka cusub ayaa ugu dambayntii ku daraya xukun wireless ah, sidaan ku arki karnay Duruustii ugu dambeysay ee Apple. Aad u badan…
iPhone 8 Plus vs iPhone 7 Plus Ma u qalantaa isbedelka?
Soo bandhigiddii Talaadadii la soo dhaafay, Sebtember 12, waxay ka tagtay isticmaaleyaal badan oo aad u qabow. Astaamaha cusub ee aad heshay ...
IPhone 7 Jet Black waa ka raqiisan yahay iibsiga weligiis
IPhone 7 Jet Black wuxuu ka mid ahaa taleefannadii sida weyn u soo jiitay dareenkeennii ugu dambeeyay ee ...
Apple waxay suuqa kala baxday iPhone 7 (PRODUCT) RED
IPhone-ka cas wuxuu ahaa mid ugub ah sanadkaan, wuxuuna ahaa midab ay isticmaalayaal badan ...
iPhone 6 iyo vs. iPhone 7: falanqaynta fiidiyowga ee khilaafaadkooda